Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelo oo magaalada Jowhar ka bilaabay kulamo uu uga hortagayo mooshin ka dhan ah. – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelo oo magaalada Jowhar ka bilaabay kulamo uu uga hortagayo mooshin ka dhan ah.
Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelada dhexe ee Dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweynaha maamulka Hirshabeele Maxamed Cabdi Waare uu halkaasi galinkii danbe ee maalinkii sabtida si deg deg ah ku tagay kadib markii labo malain ka hor qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeele ay ka gudbiyeen mooshin isaga ka dhan ah.
Mooshinkaasi oo uu aqbalay gudoomiyah baarlamaanka Maamulkaas ayaay xildhibaanadu sheegeen inay uga gooleeyihiin xilka qaadista madaxweyne Waare wuxuuna dhankaasi magaalada Jowhar ka bilaabo kulamo uu ku doonayo inay xildhibaanadaasi go’aankooda badalaan hadii aysan taasi suuro galina sidii u u heli lahaa xildhibaano kale oo Mooshinkaasi ka difaaca marka la gaaro cod u qaadista Mooshinkaasi.
Madaxtooyada maamulka Hirshabeele ee magaalada Jowhar waxaa xalay kulamo iskula qaatay madaxweyne,waare,ku xigeenkiisa,gudoomiye kuxigeenada koobaad iyo Labaad ee baarlamaanka Hirshabeele iyo qaar ka mid ah xildhiibaanada maamulka Hirshabeele oo taageersan madaxweyne Waare waxayna ka wada hadleen sidii mooshinkaas loo baajin lahaa sida ay sheegayaan wararka saaka ka imaanaya magaalada Jowhar.
Qaar kale oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeela ayaa dhankooda ka baaqday kulankaasi waxayna sheegen in kulanka ugu horeeya baarlamaanka maaamulkaas ay gayn doonaan mooshinka ka dhanka madaxweyne Maxamed Cabdi Waare si uu isaga dafaaco eedaymaha ay u soo jeedinayaan.
Waxyaabaha ay xildhibaanadaan ku eedaynayaa madaxweyne Waare ayaa waxaa ka mid ah shirar aysan baarlamaanka maamulkaasi ka warqabin oo uu kaga qayb galay magaalooyin dhowr ah oo Soomaaliya ku yaala iyo sidoo kalena in mudadiisa ugu badan uusan ku sugnayan kulamada ay yeelanayaan masuuliyiinta maamulka Hirshabeele,waxayna ku eedeeyeen inuu fariisan ka samaystay magaalada Muqdisho.
Waxyaabaha kale ee lagu eedaynayo waxaa ka mid ah in dhaqale lagu soo qaaday magaca maamulka Hirshabeele aan la ogayn halka la marsiiiyay sidoo kalena aysan jirin xisaab celin ku aadan lacagahaasi oo la hayo.
← Hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya oo beesha caalamka ka codsaday inay xaliso khilaafka dowlada dhexe kala dhexeeya.
DHAGEYSO Digniino loo diray shacabka ku nool degmada Caabudwaaq. →